पुस्तक समीक्षा: पाल्पालीका गजल ः प्रेरणाका सुन्दर स्रोत | चितवन पोष्ट दैनिक
पुस्तक समीक्षा: पाल्पालीका गजल ः प्रेरणाका सुन्दर स्रोत
२०७० माघ २५, शनिबार ०३:३९ गते
गजल होस् कि कविता, धेरैजसो रहरले नै लेख्नेहरु छन्, किनकि यो अझ व्यावसायिक भैसकेको छैन । उनी रहरको अनौठो नशामा डुबेर गजलका शेरहरु बुन्ने गर्छन् । फुर्सदको समय उपयोग गर्ने क्रमशः निस्केका उनका गजल यथार्थमा मीठा, रसिला र रहर लाग्दा भएका छन् ।
पाल्पालीले पछिल्लो आफ्ना गजलकृतिको नाम ‘रोशनी’ गजलसङ्ग्रह राखेका छन् । यो उनको गीतिलयमा र आक्षेरिक लयमा आधारित गजलसङ्ग्रह हो । काफियाको प्रयोग भए पनि शास्त्रीय नियमसँग नबाँधिएका गजललाई उर्दूमा कत्तआ भन्ने गरिन्छ । कत्तआले कविता विशेषलाई बुझाउँछ । परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन भै मुक्तलयमा पनि गजलको रचनाविधि स्वीकारिएकाले कत्तआ नभनी गजल नै भन्नुपर्ने हुन्छ । ‘रोशनी’ हिन्दी शब्द हो । यसको शाब्दिक अर्थः ज्ञान, ज्योति, प्रकाश, उज्यालो वा दियो आदि भन्ने हो । हिन्दी शब्द भएकाले नेपाली शब्दकोशभित्र यसको प्रवेश छैन ।
पाल्पाली पाल्पासँग बढी प्रेम गर्ने र नेपाली भाषामै पूरा व्यवहार चलाउने नेपाली हुन् । उनले गजलकृतिको नाम नै ‘रोशनी’ किन राखे ? र गजलकृतिको आदि र अन्त्यतिर ‘रोशनी’लाई नै रदिफ बनाएर गजल किन लेखे ? यो तथ्य बढी पढे, गाए र तिनबाट अधिक प्रेरित र प्रभावित पनि भए । ज्योति वा प्रकाशभन्दा उनलाई बहुअर्थी भएको ‘रोशनी’ शब्द नै बढी उपयुक्त लागेर आफ्नो अभिव्यक्तिलाई रोचक र मनोरम तुल्याउनका साथै गायन पक्षलाई बढी सबल र अर्थलाई पनि बढी गम्भीर तुल्याउन पनि उनले ‘रोशनी’ शब्दको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । गजल सिर्जनालाई एक ‘रोशनी’ सम्झी व्यापार व्यवसाय र समाजसेवाका साथै गजल सिर्जनामा निरन्तर प्रकृति वसत् लागिपर्ने पाल्पाली गजलकारका रुपमा धन्य देखिन्छन् ।
वि.सं. २००३ मा पिता मरहुम अब्दुल गफुर मियाँ र माता मरहुम बिबिरन मियाँका कोखमा पाल्पाको पश्चिम गाउँ तानसेनमा जन्मी–हुर्की ‘पाल्पाली’ उपनाम लिएर भरतपुर–२, बेलटाँडी, नारायणगढ, चितवनमा व्यवसाय र आवास बनाएर युसुफदिन मियाँ ‘पाल्पाली’ २०४२ सालदेखि गजल क्षेत्रमा मलजल तुल्याउँदै आइरहेका छन् ।
साहित्यिक विधामा गजलको बेग्लै अस्तित्व र पहिचान बन्दै गएको भए पनि यो कविताभित्रकै एक छुट्टै विधा हो । यसको संरचना पद्धति बेग्लै प्रकारको देखिए पनि यो कविता सत्ताभन्दा बाहिर पर्दैन । मुक्तक र गीतजस्तै यो पनि स्वयम् पूर्ण उपविधा हो । जतिसुकै व्यापक र विस्तार भए पनि मूल प्रकृति कविताकै अन्तर्गत पर्दछ । गेयात्मक त¤व प्रबल रहने हुँदा यो गीतकै सन्निकट तथा संक्षिप्त सघन र साङ्केतिक रुपमा प्रभावमा तीव्र प्रक्षेपण हुने हुँदा मुक्तकको नजिक देखिन्छ । यस दृष्टिले गीत र मुक्तकसँग यसको साइनो दिदीबहिनीको जस्तो देखा पर्दछ । जे होस्, अहिले गजलको लहर उर्लिंदै गएको छ । यही लहरमा परम्परागत सरल र सहज शब्द–शैली अँगालेर ‘पाल्पाली’ले गजलको गरिमा प्रभावलाई विस्तृत तुल्याउँदै लगेका छन् । अथवा, विषयवस्तुमा अधिकतर प्रेम, अनुराग त्यसबाहेक जन्मभूमिको माया, शान्ति, ईश्वरीय आस्था, समसामयिकता, मानवीयता तथा शिल्पमा रदिफ र काफियाको मनोरम मेल, कत्थ्यम् कार्यकथनको समुचित शृङ्खला, सुललित पदविन्यास, लयगत माधुर्य, झर्रो प्रस्तुति, कथन वैचिवियले गजलकार स्वयम्लाई मात्र नभै साहित्यिक जगत्लाई नै एक नयाँ दियो वा ज्योतिको काम गरेको हुँदा उनको गजलकृति ‘रोशनी’ उनकै जीवनको एवम् साहित्यिक जगत्कै एक ‘रोशनी’ सिद्ध भएको देखिन्छ ।
‘पाल्पाली’ गजल अनुरागी र सर्जक मात्र नभै गजल गायक पनि हुन् । उनका गजलमा गायन पक्ष प्रबल रुपमा रहेको पाइन्छ । यद्यपि, गजल गेय विधा नै हो । किन्तु, अचेल गजल पनि कविताको प्रभावमा परी पढ्य रुपमा बढी प्रकाशित हुन थालेका छन् । गेय हुनलाई लयको माधुर्यता एवम् रदिफ, काफियाको मनोहर छटा चाहिन्छ । हुन पनि उनका गजल गेयगुणले ओतप्रोत रहेका पाइन्छन् ।
‘पाल्पाली’ समाजसेवी हुन् । अनेकौँ सामाजिक सङ्घसंस्थामा रहेका कार्यकारी पदले त्यस तथ्यको पुष्टि गर्दछन् । सामाजिक सभा समारोहमा गजल गायकका रुपमा उनको उपस्थिति आल्हादजनक पाइन्छ । सबैका नजरमा उनी श्रेय र प्रेय बनेका भेटिन्छन् । यही प्रेरणाले उनको गजल सिर्जना विकसित भइरहेको पाइन्छ । उनी स्वतन्त्र र उन्मुक्त गजलकार हुन् । गोष्ठीमा बाँधिएर चल्दैनन् । अन्य कसैसँगको होड वा प्रतिस्पर्धामा पनि उनी उत्रिँदैनन् । उनी गजलसिद्धान्तको कोरा कसरतमा पनि लाग्दैनन् । कहीँ गजल प्रतियोगितामा भाग लिएका पनि देखिन्नन् । उनको गजलयात्रा एकलव्यको झैँ आफ्नै गन्तव्यमा गतिशील छ । स्वाभाविक र स्वःस्फूर्त रुपमा निर्मित उनका गजल मौलिकताको मनोरम भाव र शैलीले सम्पन्न देखिन्छन् ।
शृङ्गारिक भाव नै उनका गजलको मफुम वा विषयस्रोत रहेको छ । त्यसैको अनुसरण गर्न ‘पाल्पाली’को गजल प्रवृृति देखिन्छ । शृङ्ग्नलाई पनि शिष्ट र मर्यादित रुपमा प्रस्तुत गरेका उनले इज्जत र आबरूको पनि पूरापूर ख्याल राखेका छन् । इज्जत पाउनलाई इज्जत दिन सक्नुपर्छ भन्नेजस्ता उनका उदान्त धारणा उच्चस्तरका देखिन्छन् ।
इज्जत पाउनलाई इज्जत दिन सिकौँ
नत्र फाटेर जाने चोलीको डर लाग्छ ।
‘रोशनी’ (२०६९) पृ. ४८,
गजलको उत्पत्ति र विकास शृङ्गारिक भावबाटै भएको हो । गजल शृङ्गारिक भावमै रचिनु पर्छ भन्ने मान्यताले पनि केही समय अधिकार जमाइरह्यो । अहिले आएर भने यो सबै भावमा फुक्न, फैलन पाई पुरानो मान्यतालाई पाखा लगाइसकेको अवस्था छ । स्त्रीसँगको संवाद भन्ने परिभाषाले पनि शृङ्गारिक रुपमा नै विकसित हुन बल पु¥याइरह्यो । यस सन्दर्भमा ‘पाल्पाली’का गजल बढी शृङ्गारिक भावमा आधारित छन् । संयोग र वियोगमा वियोगजन्य भावकै प्रस्तुति अधिक देखिन्छन् । शृङ्गारिक भाव मायाकै कारण फुट्दछ । ‘पाल्पाली’ले नरको नारीप्रति वा नारीको नरप्रति हुने स्वाभाविक चोखो मायालाई नै बढी मह¤व दिएका छन् । उनको माया मर्यादाका साँध, सीमान्तमै केन्द्रित छ । उनले आफ्ना गजलमा सामाजिक, नैतिक मर्यादाका साँध, सिमाना भत्काई विलासिताको गन्धसम्म पर्न दिएका छैनन् । सार्वजनिन र सार्वभौमिक मायाको विषयलाई सिर्जनाको स्रोत तुल्याउनु उनको मुख्य विशेषता हो । त्यसैले पनि उनका गजल रूचिकर र प्रियकर सिद्ध भएका छन् ।
माया वा प्रेमले मानिसको जीवनलाई सरस एवम् सुखद तुल्याउँछ । प्रेमको विषयलाई लिएर गजल सिर्जना गर्नु र त्यसलाई सामान्यीकरण गरी सर्वग्राह्य तुल्याउनु मह¤वपूर्ण पक्ष हो । उनका गजलप्रेमको आवमता र विशालताको भावसूत्रमा उनिएका छन् । प्रेम नै यस्तो अनमोल त¤व हो, जसले हर कसैलाई जोड्न सक्दछ । जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदिले मानिस–मानिसबीच भेद उत्पन्न गराउँछन् । मठ, मन्दिर र मस्जिदले पनि आपसमा शत्रुता राख्दछन्, किन्तु प्रेमले सबैलाई एक गराउँछ । यस्तो मानवीय जीवनको मह¤वपूर्ण त¤व प्रेमलाई उनले अनेक कोणबाट बखान गर्दै त्यसको महिमा सिद्ध गर्ने प्रयास गरेका छन् । प्रेमलाई नै परम आनन्दका रुपमा लिने उनी धनदौलतलाई सामान्य सम्झँदै भन्दछन्ः
नन्दन चाहिँदैन सम्पति खोजे छैन
प्रेमको आँगनमा डुल्न देऊ मलाई ।
‘रोशनी’ (२०६९) पृ. १०
धन सम्पत्तिमा कति अल्झिने हो ?
छोडी जान पर्छ दुनियाँको घर ।
‘रोशनी’ (२०६९) पृ. ४२,
उनी खुदा वा अल्लाहा भक्त इस्लाम धर्मावलम्बी व्यक्ति हुन्, तर उनले समस्त ईश्वरलाई एकात्मक भावले हेरी रामको नाममा पनि आफ्ना भक्ति भावना प्रकट गरेका छन् । यस दृष्टिले उनी मानवताको उच्च तहमा उठेका गजल सर्जक हुन् । सर्वभौमिक शाश्वत् विषयलाई गजल सिर्जनाको आधार बनाएर उनले गजल विषयको सान्दर्भिक उठान र काव्यको पुष्टिपूर्ण बैठान गरी गजलका शेरहरुलाई मार्मिक र प्रावोत्पादक तुल्याएका छन् ।
‘पाल्पाली’बौद्धिक जगत्मा ठूलै योग्यता र दक्षता हासिल गर्ने व्यक्ति भने होइनन् । त्यसो त, उनले शास्त्रीय ज्ञान र चिन्तनसँग खेलिरहने अवसर पनि पाएनन् । उनी त व्यापार व्यवसायमै संलग्न भइरहे । जीवनको उत्तराद्र्ध कालमा पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदै गएपछि समाजसेवातर्फ आफूलाई सक्रिय तुल्याइरहे । उनको शिष्ट, भद्र, सरल र नम्र व्यवहार सबैमा रूचिकर र प्रियकर बन्दै गयो । व्यापार व्यावसायिक कारोबारसँगको सक्रियता र विभिन्न व्यक्ति र संस्थासँगको संलग्नताले उनी सामाजिक अनुभवमा पनि समृद्ध बन्दै गए । संसार बुझेर संसारको रामरमिता एक दिन छोडेर नजानु पर्ने शाश्वत् सत्यले पनि उनलाई सचेत तुल्याइरह्यो । उनमा माया र आध्यात्मिक भावनाको मूल फुट्न थाल्यो । त्यही विषयलाई रचनाको स्रोत बनाउँदा उनका रचना बढी सरल, संवेद्य र रूचिकर बन्न पुगे ।
गजल क्षेत्रमा उनको यो चौँथो कृति हो । गजल सिर्जना र गजल गायनमै विशेष रूचि र लगाव भएको तथ्य गजलकृतिले नै प्रमाणित गर्छन् । यसभन्दा अघिका उनका गजलकृतिहरु शास्त्रीय बहरमा आधारित छन् । यो चौँथो गजल सोपानमा रमाएर आक्षरिक लय वा मुक्तलयको चयन गरी कृति नै तयार पार्नु शास्त्रीयताको परित्याग नभै जटिताबाट सरलतातर्फको यात्रा हो । साथै, साहित्यिक सौन्दर्य बहरमा मात्र होइन, उन्मुक्त लयमा पनि मुखरित हुन्छ भन्ने तथ्यको स्पष्ट प्रमाण हो । यसले शास्त्रीय जटिलताको पछि नलागी सौन्दर्यको अनुरागी भएर भावनाको सरल ढङ्गबाट विस्तार होस् भन्ने प्रेरणाको स्रोत पनि हो ।
गजलमा रदीफ, काफिया आवश्यक त¤व छन् । रदीफ, काफियाको प्रयोग भएर गजल गजलजस्तो नभएर गजल गजलशैलीमा बनेको कविता वा गीतजस्तो पनि हुन सक्छ । यस दृष्टिले उनका गजल गजलकै रुपमा सम्पन्न देखिन्छन् । उनका गजलमा कहीँ पनि गजली त¤वको कमी खड्किन्न । उनी रदीफ, काफियाको उपयुक्त मेल गराएर लयको मधुर त¤व बुन्न खप्पिस देखिन्छन् । उनले विशेषतः गैरमुसलसल वा स्वयम्मा पूर्ण शेरहरुले तासिर वा प्रभावात्मक गुणमा राम्रो पहुँच देखाएका छन् । इशारत वा प्रतीक, अदा वा छटा, रब्त वा परस्पर सम्बन्धमा पनि उनका गजल कमजोर लाग्दैनन् । गजलका सबै शेर उत्तिकै मनोहर लाग्दछन् । गजल शृङ्खलामा कतिपय शेरहरु हीरा र मोतीझैँ बनेर चम्किएका पनि छन् । बिम्बको प्रयोग पनि राम्रै देखिन्छन् । सबै गजलहरुलाई बराबर समीक्षाको अग्निमा गालेर निखार ल्याउन सकेको भए उनका गजल अझै निख्खर हुने सम्भावना पनि पर्याप्त बोकेका छन् । जे हुन्, उनका गजल रसिकको हृदय चुम्न सफल बनेका छन् ।